Tsidiho ireo tendrombohitra mahavariana indrindra eto an-tany | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | America, Aostralia, Filipina
Angamba any Espana isika dia tsy vintana fa manana tendrombohitra goavambe sy mahavariana mora azontsika fa manana azy ireo any amin'ny tontolo hafa isika. Ary na dia tsy adiny iray na roa amin'ny alalàn'ny fiara aza izy ireo, tsara vintana izahay fa afaka mahita sy mankafy azy ireo, na dia mandroso aza SARY. Tianay ny hanomezanao anay ny tananao amin'ity lahatsoratra ity, tsidiho ireo tendrombohitra mahavariana indrindra eto an-tany noho ireo sary manaitra avy amin'ny Vaovao momba ny dia atolotray anao.
Nahita zavatra mahafinaritra be dia be aho, ka saika tsy afaka nanao safidy kely loatra aho. Fa raha misy maromaro tsara kokoa, sa tsy izany?
3 Havoana sôkôla
4 Solombavam-bahoaka Fairy
5 Tilikambon'i Devoly
Mount Fitz Roy dia eo atsinanan'ny sahan'ny ranomandry Patagonian atsimo eo amin'ny sisintany eo anelanelan'i Arzantina sy Silia, any Patagonia, tsy misy mihoatra ary tsy misy zavatra kely noho izany.
Saika tanteraka rakotra ranomandryIty vatolampy vato mahavariana ity dia tsy gaga fotsiny amin'ny haavony sy ny havoany fa amin'ireo sary maro loko mahafinaritra ihany koa natolony an'ireo mpandeha izay afaka mahatratra metatra vitsivitsy miala eo aminy ary misaintsaina ny fomba tsy itovizan'ny taratry ny hazavana arakaraka ny toetran'ny masoandro.
Na dia tsy dia avo loatra aza dia vitsy ny mpihanika no nahavita nahatratra ny tampony, noho ny fahasarotan'ny tany malama, toy ny sisiny maranitra ary noho ny toetrandro tsy milamina.
Avelao àry isika hamela ny Tendrombohitra Fitz Roy ho toy ny hatsaran-tarehin'ny maro, tany azo antoka ho an'ny olom-bitsy.
Manova ny kaontinanta indray izahay (araka ny hitanao, ny halavirana dia tsy fohy araka izay tadiavinay) ary nandeha an-tongotra tany Aostralia izahay. Any no ahitanao tandavan-tendrombohitra manana anarana mampihomehy ary manana endrika tsy dia liana loatra. Io no Bungle Bungle Mountain Range, niforona tsy mihoatra ary tsy latsaky ny 375-350 tapitrisa taona lasa izay
Izy ireo dia fananganana tilikambo izay nahazo ny fisehoan'ny tantely ary raha ny fahazoantsika azy dia an'ny a tena marefo. Izany no antony, voarara tanteraka ny fiakarana amin'izy ireo.
Azonao atao ny misaintsaina azy ireo raha mandeha any ianao Aostralia ary miditra ny Valan-javaboary Purnululu, izay nambaran'ny UNESCO ho lovan'ny World Heritage tamin'ny 2003.
Raha mahita ny sary ianao, dia azonao atao ny mahatakatra ny anton'io anarana mahaliana io amin'ny havoana vitsivitsy. Amin'ny sary dia tsy ho hitanao daholo izy ireo, saingy misy mihoatra ny Havoana 1.200 ary raha te hahita azy ireo ianao dia tsy maintsy mandeha Bohol, any amin'ny Nosy Filipina izay misy azy ireo.
Ny anarany dia noho ny ahitra maintso manarona ny tendrombohitra mivadika volontany sôkôla amin'ny main-tany, manome azy ny endrik'ireo sôkôla an-jatony aelin'ny ao anatin'ny 50 kilometatra fotsiny.
Araka ny hitanao dia tsy mendri-kaja izy ireo, ary mahavariana azy ireo indrindra noho ny tsy fitovizany amin'ny ambiny, hatramin'ny avo, ny avo indrindra dia mahatratra 120 metatra fotsiny.
Amin'ity anarana mahaliana ity dia tsy fantatra ireo formations mahaliana. Nijanona tany Eropa izahay ary nandeha tany Torkia izahay izay misy azy ireo.
Ny endriny mitsangana tanteraka dia fantatra amin'ny hoe pinnacles na sambo ary mamorona renirano lava avy amin'ny fipoahan'ny volkano.
Araka ny fantatsika, ireo karazana firafitra ireo mitranga koa any Amerika Avaratra ary na tamin'ny toerana iray na tamin'ny tany hafa, ny fikaohon-tany dia nanome azy ireo endrika manirery sy lavitra. Ao amin'ny fivoaran'ny Hada any Torkia, fantatsika fa taonjato maro lasa izay, ny moanina teo an-toerana dia tsy maintsy nanamboatra toerana teo anelanelany mba hananganana ny tranony manokana.
Ary tonga amin'ny iray amin'ireo izay nanaitra ahy indrindra aho. Tsy mahaliana ve io fiofanana io? Izy io dia monolith basalt izay nantsoina hoe Monument National United States. Hita io ao anatin'ny Black Hills, ao amin'ny fanjakan'i Wyoming.
Hafa mihitsy amin'ny zavatra fantatra rehetra! Ary ho talanjona kokoa ianao hahafantatra izany mandrakotra 5,45 km toradroa ny fotony… Haharitra hafiriana ny manodidina azy?
Ny herin'ny natiora indray dia mamela ahy ho gaga tanteraka! Ary ny fahitana an'io, satria morontsiraka sy morontsiraka tokoa aho, dia manana fisalasalana lehibe momba izay tiako ho hita amin'ny fialan-tsasatra ho avy, eh? Raha tsy mila misafidy ianao, raha afaka mandeha amin'ny toerana roa, na raha mifanohitra amin'izay dia tendrombohitra kokoa noho ny Kanadiana ianao, araraoty ny andro, herinandro na volana fialan-tsasatrao ary mandosira mankany amin'ny iray amin'ireo toerana ireo.
Saintsaino ny zavatra toy izany, manamboa tsara fa mahita famolavolana tena be voninahitra sy hafa tokoa izay zatra dinihintsika, dia tsy maintsy ho zavatra niainana izany. Aza adino ny fotoana mety anananao raha miaina izany ianao ary miaina ny fotoana amin'ny fomba miavaka sy mahafinaritra toy ireny toerana ireny ihany. Ataovy ao anaty kirarok'ireo izay tsy afaka mankafy azy ho antsika, ny tenako ary mandritra izany fotoana izany, dia faly aho manohy mandinika sary tsara toa ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Tsidiho ireo tendrombohitra mahavariana indrindra eto an-tany
Mandehandeha amin'ilay lalana malaza Inca mankany Machu Picchu